Madaxweyne Gaas oo sharaxay hadal ka soo yeeray intii uu ku sugnaa dalka Imaaraatka… – Hagaag.com
21 Maarso 2019 in National // Indha Cadde: hadalkii R/wasaaraha ayaa keenay in ciidamada faarujiyaan furumaha…
21 Maarso 2019 in World // Darawal Afrikaan ah oo dab qabadsiiyey bas ay saarnaayeen caruur Iskuul magaalada Milano…
21 Maarso 2019 in National // Heshiis horudhac ah oo laga gaaray ciidamadii gadooday sidii loogu celin lahaa furumaha…
20 Maarso 2019 in National // Ciidamo soo faarujiyey goobo muhim ah ee Sh/Dhexe oo ka cabanaya mushaar la’aan…
20 Maarso 2019 in National // Wafdi ka kooban wasiiro iyo saraakiil ciidan oo loo diray inay la kulmaan ciidamo gadooday…
Madaxweyne Gaas oo sharaxay hadal ka soo yeeray intii uu ku sugnaa dalka Imaaraatka…
Posted on 5 Maajo 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali(Gaas) oo maanta soo gaaray magaalada Garowe ayaa sheegay in Puntland ay ku filantahay shacabkeeda,balse haddii ay jirto cid meel kale u hanqal-taagaysa ay u fasaxan tahay.
“Waxaan dadka reer Puntland kula dardaarmayaa in ay marwalba ilaashadan midnimadooda. Puntland iyadaa nagu filan,Haddii ay jirto cid meel kale u hanqal-taagays,waxaa runtii habboonan lahayd in qofkii meel kale u hanqal-taagaya in meesha uu aadayo aado”,ayuu yiri madaxweyne Gaas.
Dhinaca kale madaxweyne Gaas ayaa kalsooni buuxda ka muujiyay in Puntland ay ku filantahay dhammaan arrimaheeda gaarka ah oo aysan cidna uga baahneyn in ay ku tiirsanaato”Puntland waa isku filantahay,waana isku kalsoontahay,waana isku tashanaysaa haddii Ilaahay yiraahdo”,ayuu raaciyay madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Mar wax laga weydiiyey hadal ka soo yeeray intii uu ku sugnaa dalka Imaaraadka oo ahaa Muqdisho aysan Somalia aheyn, Somalia oo dhana Muqdisho kaasoo muran badan dhaliyey, dad badana siyaabo kala duwan u fasirteen ayuu yiri.
“Muqdisho keligeed Soomaaliyoo dhan maaha, Soomaaliya oo dhana Muqdisho maaha, macnaha aan ula jeeday waxay aheyd, dalku waa balaaran yahay, waana federal, waxaa imanaya deeqo iyo mashaariic badan haddii la yiraahdo Muqdisho kaliya dow maaha, waxaa loo baahan yahay dalka in loo adeego dhamaantii, laguna mashquulin caasimada kaliya” ayuu yiri C/wali Gaas.
About Admin (6144 Articles)
Amnesty International accuses US of causing civilian deaths in Somalia…
‘There was blood everywhere’: NZ mosque attack survivor…
After sparking divisive debate, Omar calls for ‘inclusive’ US foreign policy…
Qoys Somali ah oo baadi goobaya wiil 3 jir ah oo ku sugnaa masjidka Al-Noor xiliga weerarka…
Gabar lagala noqday dhalashada Ingriiska oo cunug yar ay dhashay ka saqiiray…